QM oo abaal-marin siisay saxafiyiin jooga Puntland oo ku guulaystay tartan dhacay sanadkii hore – Sawirro • Horseed Media
You are here: Home / Featured / QM oo abaal-marin siisay saxafiyiin jooga Puntland oo ku guulaystay tartan dhacay sanadkii hore – Sawirro
QM oo abaal-marin siisay saxafiyiin jooga Puntland oo ku guulaystay tartan dhacay sanadkii hore – Sawirro
February 17, 2014 - By: Abdirizak Shiino
Qaramada midoobey iyo ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa abaal-marino gudoonsiiyey maanta 8 ka mid ah weriyaasha soomaalida oo ay afar ka mid ah joogaan Puntland, xaflada abaal-marinta ayaa ka dhacday Garoowe iyo Muqdisho.
Munaasabada abaal-marinta lagu bixinayey ayaa weriyaasha Puntland ee guulaystay waxaa loogu qabtay PDRC waxaa ka qayb galay saxafiyiinta gobolka jooga, madaxda ururrada MAP, NUSOJ, ururrada rayidka ee PUNSAA, wasaarada warfaafinta iyo saraakiil ka socday UNDP.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ Burhaan Axmed Daahir oo xaflada hadal dheer ka jeediyey ayaa u hanbalyeeyey weriyaasha guulaystay, sidoo kale wuxuu goobta ka akhiriyey khudbad loogu talo-galay bixinta abaal-marinta oo soo diray Philippe Lazzarani xiriiriyaha arrimaha bini’adanimo ee QM u qaabilsan Soomaaliya.
“Saxafiyiinta ha ku dadaaleen in ay gudbiyaan xaqiiqooyinka bini’adanimo iyo codka dadka dhibaataysan ee jooga deeganadiina.” Ayaa lagu yiri qoraalka Philippe Kazzarani ee loo qorsheeyey munaasabada.
Saxafiyiinta dhinaca Puntland guulaystay ayaa kala ah : –
Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed – Horseed Media
Cabdiraxmaan Axmed Yuusuf – Radio Daljir
Cabdi Xasan rooble Awoowe – Radio Daljir
Maxamed Salaad Xaaji Dirir – Radio Daljir
Wasiirkii hore ee warfaafinta Puntland Axmed Sheikh Jaamac oo xiray munaasabada bixinta abaal-marinada kala duwan ee la siiyey weriyaasha, waxaa uu sheegay in ay tahay guul weyn talaabada ay qaadeen saxafiyiinta, waxaa uu ku dhiiri-geliyey in howsha sii wadaan.
Tartanka saxafiyiinta Soomaaliyeed oo dhacay dhamaadkii sanadkii hore, waxaa ka qayb galay in ka badan 100 weriye oo ku sugan Koonfurta, Puntland iyo Soomaaliland, waxaana guulaystay 12 ka mid ah oo kala jooga deeganadaas, tartanka waxaa lagu tilmaamay dhiiri-gelinta saxafiyiinta ee howsha ay qabteen.